IKey 2.5.1, yType 1.0 kunye neCopyPaste Pro 3.1 Ikhutshwe. Imveliso yeMac Trio | Plum emangalisayo
Ngamana 23, 2011
IKey 2.5.1, yType 1.0 kunye neCopyPaste Pro 3.1 Ikhutshwe. Imveliso yeMac Trio
IPlum emangalisayo namhlanje ibhengeza utshintsho olutsha lwesoftware iKey, yType kunye neCopyPaste Pro ngoku ziyafumaneka njenge-shareware nakwivenkile yeApple Mac App
iKey Inguqulelo 2.5.1 - Ulwazi lwenguqulo ye -wareware, ukuThenga kunye nokukhuphela kunye neKey kwiVenkile yeApple yeMac
Ikopi yePhepha 3.1 - Ulwazi lwenguqulo yeShareware, Ukuthenga kunye nokukhuphela
yType 1.0 - Ulwazi lwenguqulo ye-Shareware, ukuthengwa kunye nokukhuphela kunye ne-yType kwiVenkile ye-Mac App
iKey sisixhobo esizisebenzelayo, esenza iinkqubo ezimfutshane zokwenza imisebenzi ephindaphindayo. Eyona nto ibalulekileyo, indlela emfutshane ye-iKey yinkqubo encinci ngokwayo, kodwa awudingi kwazi into yokuqala malunga nenkqubo yokwenza indlela emfutshane ye-iKey. Into ekufuneka uyenzile kukudibanisa izinto ezintathu ezifunekayo zendlela emfutshane: Umyalelo omnye okanye engaphezulu enika indlela emfutshane ukusebenza kwayo, imeko ebaleka kuyo, kunye nesiqalisi esichaza ukuba indlela emfutshane yenziwe njani. Oku kulula ukuyisebenzisa kwi-macro / automation utility yonga ixesha, uchwetheza, kunye namakhulu konqakrazo mihla le. Thintela i-carpal tunnel, ufeze ngakumbi kwaye wonwabe nge-iKey. Incwadana esemagqabini ebhalwe nguAdam Engst nayo ifakiwe.
-Iimpawu ezintsha kunye nemizobo ngumzobi wase-Italiya uMichele Zamparo, ukulungiswa, amaxwebhu ahlaziyiweyo.
I-CopyPaste Pro yinto yakutshanje yomntu ekuphela kwayo, ukuphumelela amabhaso, kulula ukuyisebenzisa, ukuhlela okuninzi kwebhodi eqhotyoshwayo, ukubonisa kunye nokugcina indawo yokugcina izinto. Sebenzisa isiKhangeli seClip (isikhangeli esithe tyaba) okanye iPhalethi yePlip (isikhangeli esime nkqo) ukubona iziqwengana kwiindawo ezahlukeneyo zokujonga. Sebenzisa i 'CopyPaste Tools' ukwenza idatha yebhodi eqhotyoshwayo ngephanyazo. Gcina zonke ii-clipboards ngokuqala kwakhona. Sukulinganiselwa kwibhodi eqhotyoshwayo enye kwaye ungaze ulahle ikliphu kwakhona. Ikopi yePhepha ligcina ixesha / lisindisa ubomi kubo bonke abasebenzisi beMac ukusuka kwabaqalayo ukuya phambili. Zama i-CopyPaste Pro ukwandisa amandla eMac yakho.
Iinguqulelo zoKhuphelo lokuHambisa
- ama-64 apheleleyo, amaxwebhu angcono aseFrance kunye nokwenziwa kwasekhaya. Nge-10.5, 10.6 nangaphezulu. Ayisekho kwi-10.4.
Nabani na unokuxhamla kule software yesithathu. Baluncedo ngakumbi kubabhali, abayili, abahleli, iimvumi, iipodcasters, abaqulunqi beenkqubo, izazinzulu, abaphandi, ootitshala kunye nabafundi.
I-iKey, yType kunye neCopyPaste zizixhobo zemveliso eziqhuba ngasemva ukukhulisa ubuchule bakho.